Mi pad ဘယ်ဗားရှင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ root လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ မြန်မာစာဖောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ပါ. « XMS-MMF
Mi pad ဘယ်ဗားရှင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ root လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ မြန်မာစာဖောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ပါ.
custom recovery>>>> http://www.mediafire.com/download/cz8m7y9zrl5ph1m
အခုပေးထားတဲ့လငျ့တှကေို updater က တငျလို့မရခဲ့ရငျ ဖိုငျနာမညျကို update.zip လို့နာမညျပွောငျးပီး ဘယျfolder ထဲမှမထညျ့ဘဲ internal memory ထဲကို ထားပါ..ပီးရငျ recovery mode ကနေ install update.zip from sdcard ကိုရှေးပေးပါ… တငျပီးသှားရငျ reboot now နှိပျလိုကျပါ… reboot ပွနျတကျလာရငျ အဆငျပွပေါပီ… root ရနျအတှကျ recovery ပွနျဝငျပီး supersu.zip(update.zip ပွောငျးရနျ မလိုပါ) ကို install now ကနေ တငျပါ… mi pad မှာ supersu icon ပျေါလာရငျ အဆငျပွပေါပီ…#supersu update လုပျခိုငျးပါလိမျ့မယျ.. normal, twrp/cwm လို့ပျေါလာရငျ normal ကိုရှေးပေးပါ.. မဟုတျရငျ logo မှာ ရပျနတေတျပါတယျ...မွနျမာစာထညျ့ဖို့အတှကျကတော့ အောကျက မွနျမာဖောငျ့ခြိနျခြာကိုသုံးပါ...Mm font(mmaio font changer)https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZE9FVZDtUKLx6TMb5s3yX7DG3jHu8N53Gkဒီ၂ခုနဲ့ဆို သငျ့ရဲ့ mi pad လေး အဆငျပွလေောကျပီပေါ့..
Zawgyi font >> http://www.mediafire.com/download/1s3dstwcd29bj23/Zawgyi-signed.zip
အခုပေးထားတဲ့လင့်တွေကို updater က တင်လို့မရခဲ့ရင် ဖိုင်နာမည်ကို update.zip လို့နာမည်ပြောင်းပီး ဘယ်folder ထဲမှမထည့်ဘဲ internal memory ထဲကို ထားပါ..
ပီးရင် recovery mode ကနေ install update.zip from sdcard ကိုရွေးပေးပါ… တင်ပီးသွားရင် reboot now နှိပ်လိုက်ပါ… reboot ပြန်တက်လာရင် အဆင်ပြေပါပီ… root ရန်အတွက် recovery ပြန်ဝင်ပီး supersu.zip(update.zip ပြောင်းရန် မလိုပါ) ကို install now ကနေ တင်ပါ… mi pad မှာ supersu icon ပေါ်လာရင် အဆင်ပြေပါပီ…
#supersu update လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်.. normal, twrp/cwm လို့ပေါ်လာရင် normal ကိုရွေးပေးပါ.. မဟုတ်ရင် logo မှာ ရပ်နေတတ်ပါတယ်...
မြန်မာစာထည့်ဖို့အတွက်ကတော့ အောက်က မြန်မာဖောင့်ချိန်ချာကိုသုံးပါ...
Mm font(mmaio font changer)
smart zawgyi ကို ရွေးပေးရပါမယ်.. ပီးရင် android version ကို သေချာလေး ရွေးပေးပါ မဟုတ်ရင် စာမမှန်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်...
ဒီ ၂ခုနဲ့ဆို သင့်ရဲ့ mi pad လေး အဆင်ပြေလောက်ပီပေါ့..
mi pad recovery ကို ဘယ်လိုသွားမလဲ
tool folder>updater>menu(အစက်သုံးစက် ဖုန်းညာဘက်အပေါ်ဘက်ခြမ်းမှာ) ကိုနှိပ်ပီး reboot to recovery mode
နောက်တနည်းက ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ.. ပီးရင် power+volume up ကို အတူတူဖိနှိပ်ပေးထားပါ...